पवित्र समुदायको अघि बोल्ने प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पवित्र जमघट हुनु अघि प्रार्थनाहरू
पवित्र जमघट हुनु अघि प्रार्थनाहरू
फेब्रुअरी 28, 2020
१ कप्रिथीहरू १०:१:1: आशिषको कचौरा जसलाई हामी आशीर्वाद दिन्छौं, के त्यो ख्रीष्टको रगतको भिन्नता होइन र? हामीले भाँचेको रोटी भनेको के त्यो ख्रीष्टको शरीरको भागीदारी होइन र?
होली कम्युनियनको अवलोकनलाई प्राय जसो इसाई र धार्मिक विद्वानहरूले दुरुपयोग गरेका छन्। १ always हामीले सधैं येशूको सम्झनामा गर्नै पर्छ भनेर येशूले आज्ञा गर्नुभएको केही कुरामध्ये एउटा हो, प्रभुको भोज लिनु भनेको कोरिन्थी ११: २ 11-२24 मा वर्णन गरिएझैं। यो ख्रीष्टको शरीरको आत्मिक सुरुवात हो।
जब हामी पवित्र स take्गठन लिन्छौं, तब हामी आफैले सम्झाउँदछौं कि कसरी ख्रिष्टले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो, एउटा ठूलो debtण जुन हामी कहिल्यै तिर्न सक्दैनौं। हामीले सचेत रहनु पर्छ कि हामी आफैमा वा आफैंबाट केही छैनौं, ख्रीष्टले हामीलाई हामी को हौं र हामी के हौं भनेर बनाउनुभयो, र उनले आफ्नो जीवन दिएर यो काम गरे। आज हामी प्रार्थनालाई हेर्नेछौं पवित्र भोज भन्दा पहिले भन्नु।
स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिमा भगवानले कुनै मूल्य तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। यद्यपि हाम्रो उद्धार र छुटकाराको लागि परमेश्वरले प्रायः सबै कुरा खर्च गर्नुभयो, मानिसलाई बचाउनको लागि उसले आफ्नो जेठो छोरोको जीवन दिनुपर्‍यो।
ख्रीष्टले १ कोरिन्थी ११ को पुस्तकमा यो प्रदर्शन गर्नुभयो जब उसले धन्यवाद चढाए, उसले भाँच्ने भाँडो भाँचेको थियो जुन भाँच्नुपर्ने आफ्नो शरीरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वस्तु थियो, उसले आफ्ना चेलाहरूलाई बाँडिदियो र उही नसामा उसले रक्सी लिए एक भौतिक वस्तु जसले आफ्नो रगतको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यो आफ्ना चेलाहरू माझ पिउनको लागि साझा गर्दछ। त्यसपश्चात, उनले उनीहरूलाई सँधै आफ्नो सम्झनामा यो गर्न आग्रह गरे।
यसले ख्रीष्टको शरीर बोक्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ र हाम्रो रगतमा ख्रीष्टको रगत बगिरहेको हुन्छ, त्यसकारण हामीले ख्रीष्टलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। यो जान्न तपाईंलाई चासो लाग्नेछ कि पवित्र प्रभु भोजको ठूलो आशिष हो, त्यसैले श्राप पनि यदि यो सही तरिकाले गरिएको छैन भने।
तथापि, पवित्र सभामा व्यक्तिहरूको सहभागितालाई येशूले केही सर्तहरू दिनुभयो। १ कोरिन्थी ११:२:1 मा ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसले अयोग्य गरी यो रोटी खान्छ र प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, ऊ शरीरको लागि दोषी हुनेछ र रगत प्रभुको। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि पवित्र सion्गठनमा भाग लिने प्रत्येक मानिस खराब विचार र कल्पनाशक्तिबाट मुक्त मनको सही फ्रेममा हुनुपर्दछ।
अझ, होली कम्युनियनका केही फाइदाहरू छन् जुन अनावश्यक रूपमा लिइएमा यो प्रकट हुने छैन, चings्गाइ, सहमति, सफलता र दुष्ट अत्याचारीबाट स्वतन्त्रताको साथ आउँदछ।
जब तपाईं पवित्र स take्गठन लिने क्रममा हुनुहुन्छ, यी लिने निम्न प्रार्थनाहरू हुन्;
• प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईंको पवित्र नामको महिमा गर्दछौं ताकि हाम्रो निम्ति ख्रिष्टले आफ्नो जीवन अर्पण गर्न दिनुभयो, हामी जान्छौं कि पवित्र प्रभुत्वको आधारमा हामी ख्रीष्ट येशूसँग अनुमोदन पाउँछौं र उहाँले हाम्रा सबै दुर्बलताहरू, पाप र कलवरीको क्रसमा अपमान। हामी तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछौं कि पवित्र सद्गुणको सद्गुणले, तपाईंले हामीलाई येशूको नाममा अझ नजिक ल्याउनुहुनेछ।
Heaven स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, किनकि ख्रीष्टको मासु र रगत बोकेर लैजानुहुन्छ र धर्मशास्त्र भन्छ, कसैले मलाई दुःख नपाओस् किनकि प्रभु, म ख्रीष्टको छाप लगाउँछु, हामी येशूको नाममा अत्याचारीबाट स्वतन्त्र हुने आदेश दिन्छौं।
He स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई सोध्छौं कि पवित्र समुदायको सद्गुणले तपाईले हाम्रो जीवनको प्रत्येक अंशलाई छुनुहुनेछ जुन तपाईको स्पर्शको आवश्यक छ। हामी प्रार्थना गर्दछौं कि यसले हामीलाई आध्यात्मिक रूपमा बलियो बनाउनेछ र तपाईंले येशूको नाममा परमेश्वरलाई खुशी पार्ने काम मात्र गर्न सक्नुहुनेछ।
• प्रभु येशू, धर्मशास्त्रले भन्छ कि कुनै पनि मानिस ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हो र पुरानो चीज बितेर गयो। हामी जान्दछौं कि हाम्रो छुटकारा मुल्यसहित किनेको छ, ख्रीष्टले यसको निम्ति क्रूसमा ठूलो मूल्य तिर्नुभयो र हामीले पापबाट स्वतन्त्रता पायौं। प्रभु येशू, यस पवित्र प्रभुत्वको सद्गुणले हामीलाई आध्यात्मिक सतर्कता प्रदान गर्नुहोस् कि हामी अब पाप र अधर्मको दास छैनौं। हामीलाई येशूका नाममा तिनीहरूलाई कहिल्यै फर्कन सक्ने शक्ति दिनुहोस्।
Aven स्वर्गीय प्रभु, हामी तपाईलाई यो सम्झन्छौं कि तपाईले यो सधैँ तपाईको सम्झनामा गर्नु पर्छ र जब हामी त्यो गर्छौं, तपाईले हामीलाई सिकाउनु भएको सबै चीज हामी सधैं सम्झन्छौं। हामी प्रार्थना गर्दछौं कि हामी यसलाई दण्डको लागि लिनेछैनौं, हामी यसद्वारा दोषी ठहरिने छैनौं, तर तपाईं हामीलाई येशूको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ जुन हामी येशूको अधिकारको योग्य छौं।
• यहोवा प्रभु, पवित्र जमिन भनेको तपाईंको शरीर र रगतलाई प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिने भौतिक वस्तु हो। जब हामी रगत भंग गर्दछौं र रक्सी पिउँछौं, आत्मामा हामीले तपाईंको रगत लिएका छौं, तब कसरी तपाईंको रगत हाम्रो शिरामा बगिन सक्छ र हामी अझै पनि बिरामीबाट पीडित हुनेछौं? बाइबल भन्छ किनकि उहाँ आफैंले हाम्रा सबै अशक्तताहरू सहनुभयो र हाम्रा सबै रोगहरू उहाँले निको पार्नुभयो। प्रभु, येशूको नाममा प्रभु-भोजको सद्गुणद्वारा निको पार्नुहोस्।
Christ म कसरी ख्रीष्टको रगतलाई मेरो शिरामा लान सक्छु र म अझै शैतान, पाप र अधर्मको पीडित हुनेछु। प्रभु येशू, पवित्र सद्गुणको सद्गुणले, म येशूको नाममा पाप र राक्षसबाट मेरो छुटकारा घोषणा गर्दछु।
• प्रभु येशू, हामी प्रार्थना गर्दछौं कि पवित्र स Commun्गठनको कारणले गर्दा मलाई मेरोबारेमा तिमीहरूलाई मन नपर्ने कुराको बारेमा मलाई प्रकट गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, नम्र हृदयले म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले मलाई मेरो बारेमा चासो नदिनु भयो। होली कम्युनियनलाई आँखा खोल्ने बनाउनुहोस् र येशूको नाममा तपाईंलाई अझ राम्रोसँग सेवा गर्न सक्षम हुने अन्तर्दृष्टि दिनुहोस्।
• प्रभु येशू, पवित्र सion्गठनको समय मेरो जीवन र मैले तपाईंलाई कसरी पार गरिसकेको छु भनेर सोच्ने अर्को ठूलो अवसर हो। म मेरो जीवनलाई तपाईंमा पुनर्निर्देशित गर्दैछु, म तपाईं समक्ष आफूलाई स्वतन्त्र गर्दैछु, प्रभु येशू मेरो जीवनको पूर्ण नियन्त्रण लिनुहुन्छ। मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईंको अभिव्यक्ति बन्न होस्, म मेरो सबै काममा बुबाको वास्तविक छवि बोक्न चाहन्छु, मेरो मार्फत अभिव्यक्ति फेला पार्न र मानिसहरूलाई येशू मार्फत तपाईं मार्फत हेर्न दिनुहोस्।
अघिल्लो लेखमाDebण मुक्त हुन प्रार्थना
अर्को लेखमाचर्च सफा गर्नका लागि प्रार्थना
चमत्कारका लागि कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रार्थना गर्ने
बच्चाहरूको लागि बाइबल पदहरू
ढिलाइको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दु
अप्रिल 24, 2021
२० कारणहरू किन प्रार्थनाको जवाफ दिइएन